Shina: Mankalaza Ny Andron’ny Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2017 5:42 GMT
(Marihina fa tamin'ny 9 Novambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Omaly (8 Novambra) no Andron'ny Mpanao Gazety tao amin'ny Shina tanibe.
Nanomboka tamin'ny Shina Fahagola izany ary natao ahatsiarovana ilay mpanao gazety Liu Yu-sheng (刘煜生) izay niasa tao amin'ny Jiang Sheng Daily 江 声 日报 ny andro. Nenjehin'ny Guomingdang izy tamin'ny 26 Jolay 1932 ary novonoina tamin'ny 21 Janoary 1933 noho ny fiampangana azy ho mpomba ny komonista. Tatỳ aoriana, nahita ny olona fa nenjehina i Liu satria nanoratra tatitra fanadihadiana mitsikera ny governemanta tao an-toerana izay nandray anjara tamin'ny aferan-java-mahadomelina tamin'ny alàlan'ny fanangonana “hetra” avy amin'ny mpivarotra zava-mahadomelina.
Niteraka hetsi-panoherana goavana nataon'ny fikambanan'ny mpanao gazety ny raharaha sy ny fanentanana ho amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Tamin'ny volana Aogositra 1934, nanolotra soso-kevitra ny fikambanan'ny Mpanao Gazety Hanzhou mba hanaovana ny 1 Septambra ho Andron'ny Mpanao Gazety .
Tamin'ny taona 1999, nanavao ny Andron'ny Mpanao Gazety ho amin'ny datin'ny 8 Novambra ho ara-dalàna ny governemanta Shinoa ankehitriny.
Naneho ny fihetseham-pony tsy manam-pahazotoana ny bilaogera sasany manana fahaizana ho mpanao gazety .
Nanoratra i Li Tian Lun ho setrin'ny fanambarana farany nataon'ny biraon-gazety ofisialy hoe :
Androany no Andron'ny Mpanao Gazety, voafahan-dalitra aho.
Nanana fihetseham-po tena sarotra ihany koa i Zhang Rou :
I heard that Beijing temperature is now below zero, you should wear thick jackets before going out; I heard that the control over news is very harsh now, you have to be more rational; I heard that you had written some very great reports that kicked the asses of bad guys; I heard your complaint that I am the reason for decadence, I don't know how to express my sorrow.
Reko fa ambanin'ny aotra ny maripana eto Beijing, tokony hanao akanjo matevina ianao alohan'ny hivoahana; Nandre aho fa tena henjana amin'izao fotoana izao ny fifehezana ny vaovao, tokony ho hentitra kokoa ianareo; Naheno aho fa nanoratra tatitra tena goavana izay namely ireo olon-dratsy ianareo; Reko ny fitarainanareo fa ny tenako no nahatonga ny fikoroso-fahana, tsy haiko ny maneho ny alaheloko.
Arahabaina Tratry ny Andron'ny Mpanao Gazety !
Nanao fikarohana tsotsotra momba ny fiteny lamaody tao amin'ireo gazetin'ny tanibe miisa 180 tamin'ny 8 Novambra ny Tetikasa Fampitam-baovao Shina, izay nahitàna lahatsoratra miisa 62 niresaka ny “Andron'ny Mpanao Gazety”. Namoaka ny vaovao momba ny fihetseham-pon'ireo bilaogera ny fikarohana. Ny dimy tamin'ireo fehezanteny matetika nampiasaina dia: 1. Ny Fomba Fijeren'ny Marksista Momba Ny Asa Fanaovan-gazety, 2. Ny Fomba Fijery Sosialista Momba Ny Voninahitra sy ny Henatra, 3. Ny Fanehoana Telo , 4. Tari-dàlana ho an'ny Fihevi-bahoaka, ary 5. Ny Fiarahamonina Mirindra.